Soosaarayaasha qaboojiyaha khamriga
Bacaha balaastigga ah ee qaboojiyaha ah ee gacmaha barafka loogu talagalay dhalooyinka khamriga
Si ballaaran loo adeegsan karo: naqshadeynta qabashada shaambada, khamriga cad, khamriga kacay, biirka iyo cabbitaannada kale, oo ku habboon xafladaha, jimicsiga, BBQ, dabaaldegga, aqal-gelinta iyo waxqabadyo badan oo dibedda ah
Ku rid qaboojiyaha dhalada qaboojiyaha qaboojiyaha qiyaastii 2 saacadood, oo ku siib gacanta si aad u qaboojiso cabbitaannada si dhaqso leh u hayso qaboojiyaha saacadaha. Ku habboon in lagu isticmaalo khamriga, biirka, Ololaha, iwm.
LACAG LA'AAN AH & LA HELI KARO - Gacanta qaboojiyaha khamrigu waa mid fudud, is haysta, oo habboon. Si fudud ugu qaad goobta dalxiiska, agagaarka barkadda, kaamam, ama dhacdooyin kasta si aad ugu raaxaysato oo ugu nasato cabitaannada la qaboojiyey xitaa iyada oo aan lahayn baaldi baraf ah.
SAHAL IN LA ISTICMAALO-Ku rid qaboojiyaha dhalada qaboojiyaha qaboojiyaha ilaa 2 saacadood, oo hoos ugu siib gacanta si aad u qaboojiso cabbitaannada si dhakhso leh u hayso qaboojiyaha saacadaha. Ku habboon in lagu isticmaalo khamriga, biirka, Champagne, iwm. Cabbirka badeecadda: 6.1 x 9.25 inji